Gebogebonews(London)-Xildhibaan Stephen Doughty oo ka mid ah Baarlamaanka Ingiriiska ayaa dood ka socotay toddobaadkan aqalka Baarlamaanka ee dalkaas, wuxuu kaga hadlay Somaliland iyo sida ay dawladoodu xidhiidh adag ula yeelan karto, maadaama oo uu ka dhaxeeyo xidhiidh taariikhi ahi.
Waxa isna hadalka ku raacay xildhibaan Thomas Tugendhat oo soo dhaweeyay aragtida xildhibaan Stephen. Xildhibaan Stephen Doughty ayaa yidhi “Mudanaha sharafta lihi wuxuu si dareen leh
uga hadlay meelo badan oo dunida ka mid ah. Marka ay noqoto Geeska Afrika, wuxuu og yahay inaan ahay qof muddo aad u dheer taageere u ahaa qadiyadda Somaliland, goob ay suurtagal tahay inaynu ganacsi la yeelano islamarkaana ay inaga dhexayso xidiidh taariikhi ah oo dhaqan, goob ahaan jirtay maxmiyadda Ingiriiska, balse sidoo kale Wasaaradda Horumarinta Caalamiga ahi ay ka ciyaarta door muhiim ah. Ma igu raacsan yahay in goboladaas iyo dalalkaasi ay yihiin meelo aynu isugu keeni karno dhamaan qaybaha siyaasadda arimaha debedda ee Ingiriiska?”
Xildhibaan Thomas Tugendhat ayaa isna ugu jawaabay, “Saaxiibkayga sharafta leh -waxaan sidaas u leeyahay sababta oo ah waa saaxiibkay- si buuxda ayuu sax u yahay: waa hanaanka aynu iskaashiga ula yeelanayno dalalka adduunka oo dhan, oo ay ku jirto Somaliland, inaga oo waxa aynu isku gaynaynaa aanay ahayn oo keliya dadaalo deeq shisheeye, balse mararka qaarkood caddaalad, isku xukunka sharciga, booliiska iyo xitaa difaaca si aynu u xaqiijino inaynu ku waajahno hab iskaashi ah oo wada socda si anynu uga samayno is-bedel dhab ah dalalkaas. Taasina waa waxa ay tahay inaynu samayno.
Doodan ayaa ka qabsoontay aqalka Baarlamaanka Ingiriiska 13 January oo ah toddob.